सेयरमा लगानी गर्ने चाहनेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा - IAUA
ramkrishna July 3, 2017	सेयरमा लगानी गर्ने चाहनेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा
पैसा छ, तर कहाँ लगानी गर्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? वा, दु:ख गरी कमाएको/बचत गरेको पैसा कम ब्याज आउने गरी बैंकमा राख्नुभएको छ ? के त्यसलाई सुरक्षित तवरले लगानी गरी राम्रो प्रतिफल कमाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने, सेयरमा लगानी पनि एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । सेयर बजार त्यस्तो क्षेत्र हो, जसमा सचेत र विवेक पुर्‍याएर लगानी गरे छोटो समयमै मनग्य कमाइ गर्न सकिन्छ । तर सचेत भने हुनैपर्छ किनभने सधैं कमाउने ग्यारेन्टी पटक्कै हुँदैन ।
– दीपराज खत्री, सेयर लगानीकर्ता
Previous Previous post: Velvet Pencil Making Business मखमली पेन्सिल बनाने का उद्योग
Next Next post: शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ता थपिँदै, कसरी प्रवेश गर्ने शेयर बजारमा ?